Izixhobo ze-Samsung Galaxy S10: ukuvuza iimpahla zabo | I-Androidsis
La intetho esemthethweni ye-Samsung Galaxy S10 Kukujikeleze ikona. Iflegi elindelweyo yomenzi waseKorea, oza kufika ecaleni kwe-Samsung Galaxy X, okanye i-Samsung Galaxy F, iya kuba nezinto ezininzi ezingalindelekanga. Kwaye, kungenjalo kungenjalo, umenzi uya kubonisa eziphambili Izixhobo ze-Samsung Galaxy S10.
Ayiloxesha lokuqala ukuba sithethe ngezixhobo ezinokubakho zeSamsung Samsung S10, enje nge ejolise kwezemidlalo inkampani isebenza. Kodwa ngoku sinokuqinisekisa ukuba kuyakubakho uluhlu olutsha lwe Isinxibo seSamsung iyafumaneka ecaleni kwelungu elilandelayo losapho lakwa-Seoul olusekwe eSe.
Njengoko besitshilo, kuyinto eqhelekileyo ukuba, ngexesha lokumiliselwa kwesiphelo esiphakamileyo ngu Samsung, Inkampani yaseKorea ithathe ithuba lokwazisa iiwotshi ezintsha, imisebenzi yokulinganisa iisongo nezinye izinto ezinxitywayo. Kwaye ngeli xesha ibingazukubakho ngaphandle. Ngelixa kuyinyani ukuba imarike enxitywayo ikwizibuko, ngakumbi ngenxa yokuzimela okulinganiselweyo okubonelelwa ziiwatchwatches zangoku, umenzi uyaqhubeka nokubheja kwezi zixhobo zoncedo. Kwaye isigqibo sakho asinakuchaneka ngakumbi.
Isamsung ityhila ngempazamo izixhobo ze-Samsung Galaxy S10
Ukongeza, ngeli xesha asithethi ngamarhe okanye ukuvuza, kodwa bekuyinkampani yaseKorea uqobo ethe yapapasha ngempazamo lonke olu lwazi ngesicelo seGalaxy Wearable, ngaphambili esasaziwa ngokuba yiGalaxy Wear. Kule app sibonile umfanekiso oqinisekisa ubukho bezinto ezitsha ezintathu zeSamsung ye-Samsung S10: iwotshi ebukhali, ibhanti ebambekayo kunye nezibhloko zentloko ezingenazingcingo ezinokuthi zithathe indawo ye-Samsung Galaxy IconX eyaziwayo.
Ngokubhekisele kwi-smartwatch entsha evela kumenzi, yitsho ukuba inkampani yaseKorea izakuveza I-Samsung Galaxy Watch ActiveImodeli enoyilo olufana ncam naleyo ye- Samsung Gear Sport, I-smartwach yenkampani yeembaleki, kwaye eya kuthi ivelele ngokuba ne-bezel ejikelezayo ukuqhuba ukuhamba ngendlela yayo.
Kule nto kufuneka sidibanise Umda we-40 mm ukubonelela ngobungakanani obulungele zonke iintlobo zezihlahla. Asinalo ulwazi oluthe kratya malunga nesi sixhobo, nangona sijonga ujongano oluchaziweyo, kuyacaca ukuba i-Samsung Galaxy Watch Active iya kuba yenye yezixhobo ze-Samsung Galaxy S10 eya kuba yinto ebalulekileyo kubathandi bezemidlalo. Kwaye ukuba bayanikezela ngexabiso eliphakathi, kunokuba yimpumelelo.
Okwesibini sine-smartband. Ukusuka kwinto esinokuyibona, kuya kubakho iinguqulelo ezimbini, i Samsung Galaxy Fit, Ukongeza kwi-Samsung Galaxy Fit e. Okwangoku sinolwazi oluncinci malunga nayo, nangona siyazi ukuba bazakusebenza ngonxibelelwano lweBluetooth, baya kusebenza nenkqubo yokusebenza kweTizen yaseKorea kwaye baya kuba nemicu ye-silicone. Kwaye ulumke, ukuba sithathela ingqalelo ukuba i-Samsung Galaxy S10e yeyona modeli yenkampani inqabileyo, kukho amathuba okuba le Samsung Galaxy Fit e smart isongo iya kuba yimodeli elula efikelela kwintengiso ngexabiso eliphakathi.
Ukuphela ngako konke Izixhobo ze-Samsung Galaxy S10 Siza kuyibona ngexesha lokunikezelwa kwayo, asinakulibala i-Galaxy Buds, ii-headphone ezingenazingcingo zenkampani efika ukuba ibe yimbangi entsha yee-Apple's AirPod ngokuba noyilo olufanayo kunye nemeko yezothutho eya kuthi isebenze ukuhlawulisa oku kunxibekayo. .
Egqibelele? Yonke into ibonisa ukuba i-Samsung's Buds ye-Samsung iya kuba nakho ukubiza umva kwakhona ukuze ibenakho ukusebenzisa ibhetri ye-Samsung Galaxy S10 ukutshajisa ngaphandle kwentambo. Ngoku kufuneka silinde de kube ngu-20 kuFebruwari ukuza kuqinisekisa lonke uluhlu lwezinto ze-Samsung Galaxy S10 eza kufika kunye noluhlu olutsha lweemodeli zosapho lweGlass S, nangona, njengoko besibonisile, sibona umthombo ukuvuza, kucacile ukuba i-Samsung Galaxy Fit, i-Samsung Galaxy Sport kunye nee-headphone ezizimeleyo Samsung Galaxy Buds ziya kuba yinyani kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Ezi iya kuba zizincedisi eziza kufika nge-Samsung Galaxy S10
Iphi iselfowuni yam?